Sweden diyaar uma aha tarxiilka safiirka Siiriya - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawirle: Anja Sahlberg/Sveriges Radio
Sweden diyaar uma aha tarxiilka safiirka Siiriya
La daabacay tisdag 29 maj 2012 kl 17.12
Todoba dal oo ka mida dalalka ugu waawayn Yurub ayaa goaansaday in ay dalalkooda ka saaraan safiirka dalka Siiriya u fadhiyaa dalalkaas. Macnaha loo mastaafurinayo safiiradaas ayaa salka ku haya dilalka foosha xun ee ka socda dalkaas siiba kii ugu dambeeyay ee magaalada Houla isbuuci hore, halkaaso lagu dilay in ka badan boqol qof.
Arrinkan ayaa loo arkaa mid u ka dambeeyay dalka Ingiriiska, kaaso la dhihi karo waa mid mudaharaad ah oo ka dhan arrimaha foosha xun ee ka socda dalkaas.
Wadamada go'aankan ku kacay ayaa ah, Garmalka, Faransiiska, Talyaaniga, Spain, Maraykanka, Kanada iyo Awstareeliya.
Tyskland, Frankrike, Italien Spanien, USA, Kanada och Australien.
Xataa in ay Sweden mastaafuriso safiirka Siiriya u fadhiya halkan ayey ahayd, sidaas waxa qaba, Jaber Zain, oo ah afhayeenka xoogaga mucaaradka kacdoonka Siiriya.
- Hadda ma jirto wax hadhay oo la sugo , waynu aragnay waxyaabihii ugu dambeeyay ee dhacay isbuucii hore, waxa loo baahanyahay hogaamiye adag oo hoosta ka xariiqa in aan loo baahnayn safiir matala dal u ka taliyo madaxweyne dadkiisa gumaadaya, ayuu sheegayJabar Zain.
Wasiirka arrimaha dibada ee dalkan Sweden oo ka hadlay arrinkan ayaa sheegay:
- Wadamadan maanta ku dhawaaqay in ay mastaafuriyaan safiirada Siiriya u jooga dalalkooda ma haystaan safiiro u fadhiya caasimada dalka Siiriya ee Damaskus, markaas wax dhib ah oo ka ratimaysa ma jirto , laakiin inaku Sweden ahaan safiir ayaa inoo jooga dalkaas, kaaso xidhiidh la leh mucaaradka. Haddi aynu mustaafurino safiirka Siiriya markaas inakuna wa in aynu keena ka soo kaxaysanaa dalkaas, ayuu sheegay wasiirka arrimaha dibada ee dalkan Sweden, Carl Bildt.
Wasiirka ayaa intaas raaciyey haddii arrinkani yahay mid wanaagsan amase mid xun wadahadalku waa furanyey, laakiin waxa aniga ila haboon in loo diro dad badan oo dhexdhexaad ah dalkaas.
Maanta galinka dambe ayaa waxa hoyga isu taga qaarada yurub ee magaalada Bryssel kulan ku yeelan doona 27 dal ee ka tirsan isu taga qaraada yurub.
Kulankan ayaa looga hadli doona sidii go'aan wadajir ah looga qaadan lahaa masuuliyiinta matala dalka Siiriya ee Yurub jooga.